Kachasị mma usoro ArcGIS - Geofumadas
Septemba, 2018 ArcGIS-ESRI, Akụziri CAD / GIS
Ịmepụta ngwanrọ maka usoro ihe ọmụma nke ebe obibi fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume n'oge a ma ịchọrọ ijikwa ya maka mmepụta data, iji mụbaa ihe ọmụma gbasara mmemme ndị ọzọ anyị maara ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta oke ọkwa ịmara ịdọ aka ná ntị nke ọ bụ tinyere ụlọ ọrụ gị.
ArcGIS bụ otu n'ime ọtụtụ ntanetị dị ugbu a, ikekwe ọ kachasị ewu ewu.
Nke a bụ nchịkọta ArcGIS Spanish maka usoro ndị ọzọ ị ga - ahọrọ. Iwu ahụ adịghị mkpa, agbanyeghị na agbakwunyela m data bara uru, dị ka ọnụ ọgụgụ nke awa na ụbọchị echepụtara maka usoro ọmụmụ ga-amalite na ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Mba aha Oge Ahịa Onye na-enye ihe
1 Okwu Mmalite nke ArcGIS free 100 $ Oskar Ruiz - Udemy
2 ArcGIS si na efu. Usoro Ụlọ Ọrụ Geographic free 95 $ Felipe Nicholls- Udemy
3 GIS ji etiti arcGIS mee ihe na gburugburu ebe obibi free 60 $ Isis Gómez López - Udemy
4 Usoro ArcGIS free 160 $ Franz Pucha Cofrep- Udemy
5 Ụzọ ArcGIS bụ isi: ụdị ihe eji eme ihe Awa 60 280 € GEASIG
6 Usoro Geographic Information Systems na nyocha data gbasara mbara igwe na ArcGIS Ọnwa 3 197 $ Mahadum nke Geographers nke Peru - ICIP
7 Ọkachamara ọkachamara n'ịntanetị na ArcGIS Awa 100 200 € MappingGIS
8 ArcGIS Desktop Desktọpụ n'ịntanetị - ọkwa dị elu Awa 80 240 € Ihe ọmụmụ GIS - TYC GIS
9 ArcGIS Pro - ọkwa mmalite - etiti Awa 90 209 € Imaghị
10 Ezigbo ArcGIS Ọnwa 3 170 $ MasterSIG
11 Usoro ARCGIS: Usoro ihe ọmụma nke Geographic Awa 125 375 € GeoInnova
12 Okwu Mmalite na Desktọpụ ArcGis Awa 40 250 $ Ọhụụ Geospatial EN
13 ArcGIS Geographic Information System Oge 30 kpụ ọkụ n'ọnụ 470 $ GIS Mexico
3. Ihu ihu na ihu. Nke a na-enye na-esiwanye belata, ka na-eji mahadum maka ụmụ akwụkwọ na kampos; na ọghọm nke ụgwọ dị elu yana ihe metụtara njikọ oge, okporo ụzọ, na ịkwaga na klaasị. Dị ka ihe atụ, anyị na-etinye GIS Mexico, nke karịrị $ 470 na 30 awa. Ọ bụ ezie na usoro a dị ezigbo mma, ọ ga-ejedebe na mpaghara ala amaara ama.
Ọ bụrụ na ị maara ihe ọmụmụ ndị ọzọ n'asụsụ Spanish nke a na-emepụta oge, echela ka ị mara.
[ufwp search = »arcgis» orderby = »ahịa» ihe = »3 ″ template =» grid »grid =» 3 ″]
Previous Post«Previous Rincón del Vago: Ihe ndị ahụ mere ka anyị nwee nsogbu otu ugboro
Next Post Wms2Cad - ijikọ ọrụ wms yana mmemme CADNext »